Wantoota Saxaatoo Gulaaluu
Kamshaa Fakkaasaa banuuf Mul'annoo - Kamshaawwan - Fakkaasaafili.
Wantootni fakkaasaa tarreetiin gulaalamuu yookiin fooyyeffamuu ni danda'u. Wantootni fakkaasaa karaa kanaan uumaman saxaatoo veektarii, kan ati dhabinsa qulqullinaa kamiyyuu malee bilisaan safaruu dandeessu dha.
Rogafree uumuuf, sajoo rektaangilii cuqaasiiti qareeke gara iddoo galmeeke keessaa bakka xiyyoon rektaangilichaa tokko akka tahu barbaaddutti siiqsi. Qabduu hantuutee dhiibiitii osoo gara faallaa xiyyoo rektaangilichaatti harkisaa jirtuu gadi isa qabi. Yommuu qabduu hantuutee gad lakkiftu, rektaangilichi galmee keessatti saagama. Inni filatameera, karaa baafata halqaraa amaloota isaa gulaaluu ni dandeessa.
Wantoota hedduu gosaan walfakkaatan fakkaasuuf, sajoo lama cuqaasi. Wantoota hedduu gosaan walfakkaatan fakkaasuuf, sajoo lama cuqaasi. Wantoota hedduu gosaan walfakkaatan fakkaasi.Wantoota fakkaasuu dhaabuuf osoo hantuutee hin siiqsiin galmicha cuqaasi.
Wantoota fakkaasaa xiyyoo tokko irraa gara isa birootti harkisuurra handhuura irraa banuu yoo barbaadde, osoo harkisaa jirtuu furtuu Dirqala>Alt gadi qabi. Taaligaa foddaa muraasaan, furtuu meta/ol aanaas gadi qabuun si barbaachisuu danda'a.
soo harkisaa jirtu furtuu gadi qabuun wanta uumame daangessa. Fakkeenyaaf, bakka rektaangilii iskuweerii argatta, bakka luulloo geengoo argatta. Gadi qabamee yommuu qabdoo wanta jiraataa harkistu, reeshoon aspektii wantichaa akkasumatti tura.
Wantoota madaaluuf, jalqaba meeshaa filannootiin isaan irratti cuqaasuun isaan fili. Qabdoota saddet naannoo wantichaatti argita. Yommuu qabdoota xiyyoo afran keessaa tokko harkistu, yommuu xiyyoonni biroo sadan siiqani xiyyoon faallaa dhaabbataa tahee tura. Yommuu qabdoota cinaa keessaa tokko harkistu, cinaan faallaa dhaabbataa tahe tura.
Wanta fakkasaa safaruuf gabatee furtuu fayyadamuunAjajaduraan dursii wanta filiCtrl+Tab. Furtuu . To scale in smaller steps, hold down the Option Alt yommuu xiyya furtuu gaqabdu. Esc dhiibi halata qaphxii gulaallii keessaa bahuuf.
Wantoota fakkaasaa siiqsuuf, jalqaba isaan fili. Wanta tokkootii ol filachuuf osoo cuqaasaa jirtuu furtuu dhiibi. Wantoota barruu sirrimaan qarqara isaanii irratti cuqaasuun fili. Qabduu hantuutee gad qabdee osoo jirtuu, wantoota gara iddoo isa haaraatti harkisi.
Gabatee furtuu fayyadamuun fakkaasaa siqsuu yoo barbaadde, duraan dursi wanta fili itti aansuun xiyya furtuu. Ejjatoo xiqqaadhaan siqsuuf, Dirqala Alt yommuu xiyya furtuu dhiibdu.
Wantoota fakkasaa erga uumtee fi gulaaltee gara haalata barruu baratamootti deebisuuf naannoo galmichaa fakkaasaa yookiin wantoota biroo hin qabne keessa cuqaasi. Yoo qaree fakkaasaa argite, jalqaba sajoo Fili cuqaasuun haalata kana keessaa bahi.
Odeefannoo waa'ee tokkoo tokkoo sajoowwanii
Faayilii irraa saxaatoo saaguu
Saxaatoo Kuusaa Faayaa Harkisuu-fi-Kaa'uu waliinii irraa Saaguu
Calaqqee Ka'e Saaguu
Saxaatoota fakkaasa ykn maxxansa LibreOffice irraa saaguu
Galmee Barruu keessatti Taattoo Calc Saaguu
Title is: Wantoota Saxaatoo Gulaaluu